Akyire yi, ɔkɔɔ bepɔ so frɛɛ wɔn a wayi wɔn no baa ne nkyɛn. Ɔyii wɔn mu dumienu a daa wɔne no bɛnante, na wɔakɔka asɛmpa no, na wɔatu ahonhommɔne nso.
Dumienu a ɔyii wɔn no din nie:
Simon a ɔtoo no din foforɔ Petro.
Sebedeo mma Yakobo ne Yohane nso, ɔfrɛɛ wɔn Boanerges a, aseɛ ne aprannaa mma.
Wɔn a wɔka ho nso nie: Andrea,
Alfeo ba Yakobo,
ɛnna Yuda Iskariot a ɔyii no maeɛ no.